RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Arsenal guuldarrada kala soo kulantay Crystal Palace ee Premier League – Gool FM
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Arsenal guuldarrada kala soo kulantay Crystal Palace ee Premier League
Haaruun Yuusuf April 11, 2017
(London) 11 Abriil 2017 – Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa guuldarro 3-0 kala soo kulantay naadiga Crystal Palace oo ay booqatay kulan ku tirsan horyaalka Premier League.
Gunners ayaa lagu soo ciqaabay garoonka Selhurst Park, waxaana saddex gool ee ay ku badisay kooxda macallin Sam Allardyce, kala dhaliyey Andros Townsend, Yohan Cabaye iyo Luka Milivojevic.
>- Arsene Wenger ayaa guuldarro la kulmay afar kulan oo xiriir ah Premier League oo ay kooxda uu tababaraha u yahay ee Arsenal ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda markii ugu horreysay taariikhda.
>- Kooxda Arsenal ayaa laga dhaliyey saddex goo lama wax ka badan afar kulan oo xiriir ah oo ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1929-kii.
>- Arsenal ayaa hal shuut oo bartilmaameed ah ku tuurin naadiga Crystal Palace qeybtii labaad ee ciyaarta.
>- Wilfried Zaha ayaa gacan ka geystay shan gool shantiisii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo uu u dheelay Crystal Palace, labo gool ayuu dhaliyey saddex kalena caawiye ayuu ka ahaa.
>- Yohan Cabaye ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey Premier League ee garoonka Selhurst Park, 485 maalmood kaddib, markii ugu dambeysay oo uu garoonkan gool ku dhaliyo waxa uu kaga dhaliyey Southampton bishii December sanadkii 2015-kii.
Hazard iyo Costa oo dhabarka u wada jeedin doona Chelsea [The Sun]
SAWIRRO: Tababarka Juventus iyo Barcelona ka hor kulankooda caawa